Tsvaga rwiyo rwaunoda kuteerera naSongbot, yemahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Tsvaga rwiyo rwaunoda kuteerera naSongbot, yemahara kwenguva yakati rebei
Mavhiki mashoma apfuura runyerekupe rwakatanga kutenderera rwaiti izvo Apple inogona kumanikidzwa kuwedzera redhiyo chip kuitira kuti vashandisi veAmerica vatange kushandisa iyo iPhone, sezvazvinoita nemazhinji maTerminal terminals, kuteerera redhiyo. Iyi sarudzo haina kupfuura nemumaoko eApple, asi aive masangano enyika aigona kumanikidza. Asi nepo Apple ichiishandisa kana kuti kwete, kuitira kuti titeerere chiteshi chedu chatinofarira, kana tisingashandisi sevhisi yemimhanzi, isu tinofanirwa kushandisa mafomu anotibvumidza kuteerera redhiyo kuburikidza neInternet.
Neraki muApp Store tinowana huwandu hukuru hweaya mafomu, angangoita ese akabhadharwa, seaya atinokuratidza nhasi, asi nerombo rakanaka kuti rinowanikwa mahara kurodha kwenguva pfupi. Songbot ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros muApp Store uye inotibvumidza kuwana zvinopfuura 90.000 FM ne AM radio maredhiyo yakagoverwa pasirese pasirese inotepfenyura zvemukati mayo munguva chaiyo. Asi kwete chete tinokwanisa kuteerera kumumhanzi watinofarira, asi tinogona zvakare rita tsvagiridzo dzevatinoda maartist kuteerera kune zviteshi uko nziyo dzako dziri kutepfenyurwa.
Kutsvaga kunoitwa muzviteshi zvese zviri kutepfenyura panguva ino uye kuti ivo vanopa iro ruzivo rweartist, ruzivo rwuchazotiratidza zita reiyo albha, kavha uyezve zita rwiyo. Songbot zvakare inochengetera nhoroondo nezvose zvatakatsvaga kuti tikwanise kuzviita zvakare tisinga torese zvakare. Kutenda kuSongbot isu tinogona kuteerera kune chero rwiyo rwemahara tisingabhadhare yekushambadzira mimhanzi sevhisi, asi zvine musoro kuti haitipe rusununguko rwakafanana neuhwu. Kana iwe usingakwanise kuita pasina chaunofarira chiteshi cheredhiyo, Songbot ndiyo yako app.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Tsvaga rwiyo rwaunoda kuteerera naSongbot, yemahara kwenguva yakati rebei
Ndinokutendai, ine zviteshi zvakawanda, uye sechinhu chisina kunaka kumwe kutaurwa.
IPhone inogona kunge iine adapta yeUSB-C muEurope
Kutengwa kwePocket neMozilla Foundation kunosimbiswa